सेक्युरिटी प्रेस खरिदको कमिसनमा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ (भिडियो)::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन डील गरेको अडियो सार्वजनिक गर्ने स्वीस कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि भनिने विजयप्रकाश मिश्रले यो प्रकरणमा मुख्य दोषी को को हुन भनेरसमेत खुलासा गरेका छन् ।
प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदल जसमा तीन जना मन्त्री र तीन जना सचिव रहेको बताउँदै उनले कार्यदलका सदस्यहरुले समेत यसबारेमा छिटो फाईल अघि बढाउन निर्देशन दिएको मिश्रले खुलासा गरे । उनकाअनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीपनि यो प्रकरणमा संलग्न छन् । उनले समेत छिटो फाईल ल्याउन निर्देशन दिएको मिश्रले खुलासा गरे ।
यो प्रकरणमा आफ्नो विजय प्राप्त भएको उनले दाबी गरे । उनले भने,‘यहाँ ७० करोडको मात्रै भ्रष्टाचारको कुरा थिएन, करिब ५ अर्ब भ्रष्टाचार हुनबाट मैले देशलाई जोगाएको छु । यो प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ ।’
अडियो बाहिरिएपछि गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको विषयलाई उनले नैतिक साहस देखाएको चित्रण गरे । उनले भने,‘म प्रशंसा गर्छु । तर, यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ ।’
गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोडको कमिशन डिलको अडियो प्रकरण बाहिर ल्याएका विजय प्रकाश मिश्रले आफूले उक्त अडियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नदिएको भन्दै आफ्नो बोली फेरेका छन् । यसअघि आफूले डेढ महिना अघि नै उक्त अडियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको बताएका मिश्रले बोली फेरेका छन् ।
आफू स्विस कम्पनीको एजेन्ट नभएको पनि उनले जिकिर गरे । यो प्रकरणमा नेपालस्थित् स्विट्जरल्याण्ड दूतावासलाई मुछ्न खोजिएको भन्दै उनले यसमा पनि आफ्नो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । मिश्रले आफूले ५ अर्बभन्दा बढिको हुन लागेको भ्रष्टाचार रोकेको दाबी गरे । उनले भ्रष्टाचारविरोधी गाडी सिंहदरबार प्रवेश गरेको सुनाए ।
आफूले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड नियोजित रुपमा नगरेको समेत मिश्रले जिकिर गरे । मन्त्रीलाई भेट्नुपूर्व आफूले त्यहाँ ठूलो ठूलो राजनीति गफ गर्ने व्यक्ति को रहेछ ? भनेर भिडियो गरेको र त्यतिनै बेला आफू मन्त्रीसँग भेट्न जानु परेकोले रेकर्ड बन्द नभएको र त्यही बेलामा बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड भएको उनको जिकिर छ ।
नेकपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्य पाठकमाथि जापानको पिआरधारी भएको आरोप लागेको छ । गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको कमिशनको अडियो बाहिर ल्याएका विजय प्रकाश मिश्रले सांसद पाठकमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन् । जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मिश्रले पाठकसँग जापानी पिआर रहेको कुरा आफूले थाहा पाएको बताउँदै यसबारेमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने समेत माग गरे ।